၈.၈.၈၈ နှစ်ပတ်လည် ငွေရတုအခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
Home » History » ၈.၈.၈၈ ရဲ့ငွေရတု ပုံရိပ်များ
၈.၈.၈၈ ရဲ့ငွေရတု ပုံရိပ်များ
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Aug 8, 2013 in History, Photography, Politics, Issues, Society & Lifestyle | 10 comments
ယနေ့ ကျနော်တို့ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့(၈.၈.၈၈) ၂၅ နှစ်မြောက်၊ငွေရတုအခမ်းအနား မြင်ကွင်းများကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
စစ်အာဏာရှင် တစ်ပါတီ စနစ်ဆိုးကို ရဟန်းသံဃာ၊ကျောင်းသားမိဘ၊ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်၊နောင်အနာဂတ်ရဲ့ သူရဲကောင်းညီငယ်ညီမငယ်များ အစဉ်အမြဲသတိရ အတုယူနိုင်ပါစေ…
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ နောက်ဆုံးအမှာစကားလေးကတော့ နောင်လာမဲ့ အနာဂါတ်တွေမှာလဲ အဲဒီလို အကျင့်ဆိုး စနစ်ဆိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေလာရအုံးမယ်ဆိုရင် ၈.၈.၈၈ ရဲ့အလံတွေ နဲ့ လူထုတိုက်ပွေတွေရှိနေအုံးမှာပါပဲ…
အမေစုရဲ့ စကားလက်ဆောင်ကတော့ ညီညွတ်ခြင်းဆိုတာ တစ်သွေး၊တစ်သံ၊တစ်မိန့်နဲ့ ညီညွတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ညီညွတ်ခြင်းမျိုကို ခေါ်ဆိုပါတယ် လို့ဆိုပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများအားလုံး ညီညွတ်နေသမျှကာလပတ်လုံး ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊အာဏာရပါတီဖြစ်ဖြစ် ကြောက်ရွံနေစရာမလိုတော့ပါဘူး လို့ဆိုချင်ပါတယ်…
ညီအကိုမောင်နှမ အားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ…..
လူဒွေဒေါ့ အားဂျီးဘဲ …
အဲ့လူဒွေထဲ ကျား များလား၊ မ များလား မသိဘူးနော့ ….
စကားမစပ် … ဖွဘုတ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောရရင် …
ဒီထဲမှာ မှန်တယ် ပေါ့ ….
ပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာ မြင်ရလို့ ကျေးဇူးပါဗျ
၆ ရက်နေ့ က ရောက်ဖြစ်ပေမယ့်
ဒီလောက် စုံလင် တဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မတွေ့ ခဲ့ရ ချိန်ဆိုတော့
အခု မြင်ခွင့် ရ လိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေ အတွက်
လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက် တူဖို့ နဲ့ သူများအမြင် ကိုလဲ လေးစား တန်ဖိုးထား တတ်ဖို့ဘဲ လိုတာပါ။
ပုံလေးတွေ မျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုဇော်မင်း။
စနစ်ဆိုး နဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေ
မဟာအံ့စာတုံးရေ…ကျားများလား မများတော့ အနော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျား…(ကျား များလိမ့်မယ်ဟုထင်ပါတယ်)….
ဟုတ်ပါတယ် …အလင်းဆက်ရေ…နောက်ဆုံးနေ့နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတော့ တော်တော်လေးစည်ကားပါတယ်…
အရီးရေ..အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ…ဟုတ်ပါတယ်…တစ်ဖက်က အမြင်ကိုလည်း လေးစားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်…
အင်း…အဲဒီနေ့ကလည်း ဒေါ်စုပြောသွားတာကြားလိုက်သေးတယ်….ဒါကတော့ ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့
လူထုအင်အားကိုကြည့်ပြီး နှစ်သစ်သဘောကျကြောင်း…ဒါပေမယ့် အဲဒီအင်အားကို တစ်လွှဲမသုံးမိစေဖို့ သတိပေးသွားပါသေးတယ်…
ဟုတ်ကဲ့ အမ ခင်ခရေ…ကျနော်တို့ နောက်ထပ် အဲဒီလို အဖြစ်ဆိုး၊စနစ်ဆိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှ မကြုံရပါစေနဲတော့လိုတုတောင်မိပါတယ်ဗျာ…
ကိုမင်းကိုနိုင်က နိုင်ငံတော်အလံတွေသာ အဆက်ဆက်ပြောင်းသွားပေမယ့်…ကျနော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကတော့ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူးတဲ့…..
ယခုပွဲကို နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကတတ်ကြပါတယ်။တစ်ချိန်က မယုံကြည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မလိုက်နာနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း တွေက ဒီမိုကရေစီ တူချီတက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ ကြွေးကြော်နေတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ကျနော်တို့ ယုံကြည်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီလူတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဖြစ်ကြောင်း ဒီထက်ပိုပြီးပြသပေးဖို့ လိုပါတယ်…လို့ပြောကြားသွားပါတယ်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က…ကျမတို့မတူတဲ့သဘောတွေကို ညှိနိူင်းပြီးတော့ သဘောတူညီချက်တွေကို လုပ်ရပါမယ်၊မတူတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုလည်းညှိယူရပါမယ်…အားလုံးရဲံ့အဓိကပန်းတိုင်ကတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေချင်ကြပါတယ်၊
…ဂေါက်နေတဲ့သူတွေတော့ မပါဘူးပေါ့နော်… သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကို ဘာကိုကြောက်နေလို့ မတို့ရဲ၊မထိရဲ၊မကိုင်ရဲဖြစ်နေတာလဲ လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ဥပဒေဆိုတာ လူတွေလုပ်ထားတာပါ…သက်မဲ့ စာတန်းကိုပြင်ရဖြည့်ရမှာ ဘာလို့ကြောက်နေတာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်သွားပါတယ်….
ကိုသူရကြီးကို မီဒီယာတွေထဲ သိပ်မတွေ့ရတော့တာ မီဒီယာသမားတွေကပဲ ရှောင်ကွင်းနေကြတာလားမပြောတတ်ပါဘူး သူကြီးရေ….အဲဒီနေ့ကလည်း ကိုသူရကြီးတစ်ယောက် လမ်းကြောင်းရှင်းနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်…
အဲဒီနေ့က အနော်လည်း ဆင်ပေါ်မှာလေ… အတွေ့ဗူးလား အောက်ပြုတ်မကျအောင် မနည်းကိုင်ထားရဒယ်….
ကိုကြောင်က ပြုတ်ကျမှာကြောက်စရာမလိုပါဘူး….ကြောင်ပဲ ဟာကို…..ဟာကို……